विविधता र मार्केटिंग | Martech Zone
विविधता र मार्केटिंग
बुधबार, अक्टोबर 18, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मैले मेरो नयाँ साथीसँग विविधतामा पोष्ट पढें। जेडी वाल्टन। जेडीले एक ब्लग सुरू गर्यो जुन बजारमा कालो बजारमा बजार गर्दछ उहाँ एक अमेरिकी सफलताको कहानी हो र आफ्नो अनुभव अरूलाई साझा गर्न चाहानुहुन्छ।
यसले मलाई यत्तिको उत्तेजित गरायो कि म थियो विविधता मा मेरो विचारहरु को बारे मा लेख्न। विविधता मार्केटिंग र स्वचालनसँग के गर्नुपर्दछ? यसको डगसँग के गर्नुपर्दछ, यो 38 XNUMX बर्षे फ्याट सेतो मान्छे? सबै! हाम्रो देश र हाम्रो विश्व दिन प्रति दिन धेरै विविध हुँदै गइरहेको छ। किफायती पहुँच र हार्डवेयर जनतामा आउने बित्तिकै इन्टरनेट सही पिघल्ने भाँडो हुँदैछ।
यदि तपाई सफल हुन चाहानुहुन्छ भने तपाईले सबै जाति, क्रीडहरू र लिnd्गलाई सम्मान गर्नुपर्दछ र बोल्नु पर्छ। यदि तपाईको व्यवसाय बढ्न चाहान्छ भने तपाईको कम्पनी पनि विविध हुनुपर्दछ। मार्केटको सेक्टरलाई प्रभावी ढंगले सेवा दिन असम्भव छ यदि तपाईंसँग बजारको त्यो क्षेत्रबाट इनपुट छैन भने।
केही व्यक्तिहरू विविधता कार्यक्रमहरूमा आन्तरिक रूपमा हेर्दछन् र यसलाई पदोन्नती हुन वा कसैसँग कुरा गर्न समय भन्दा पहिले पदोन्नति हुनको लागि आफ्नो बहानाको रूपमा प्रयोग गर्छन्। म यो छोटो दृष्टि र शायद एक अज्ञात हुन विश्वास गर्दछ। कसैको जाति, लि ,्ग, इत्यादिमा पदोन्नति प्रदान गर्नाले ब्यापारका साथ साथै व्यक्तिगत अवसरका लागि अवसर खोल्न सक्छ।
यहाँ मिलियन डलरको प्रश्न छ ... जब तपाईंको कम्पनीले अल्पसंख्यक र महिला सक्रिय रूपमा प्रबर्धन गरेर सफलतापूर्वक बढ्दछ, नयाँ अवसरहरू त्यो कम्पनी भित्र सबैको लागि आउँदछ। यो कुखुरा वा अण्डा हो। सायद तपाईंसँग पदोन्नती हुने अवसर कहिल्यै थिएन होला पहिलो स्थानमा विविध कार्यस्थल बिना।
गुगल उन्नत खोज चर परिभाषित
Salesforce.com इन्टरनेट एक्सप्लोरर working का साथ काम गरिरहेको छैन (यसले वास्तवमा गर्छ!)
अक्टूबर २१, २०१ at २:०22 बिहान
त्यो विचारशील पोष्ट थियो। मलाई लाग्छ तपाईंको अन्तिम वाक्य राम्रो रैप-अप हो।
नोभेम्बर २०, २००। 11::2006 अपराह्न
यो हुनु पर्छ कि अल्पसंख्यकको भाँडा नैतिक मुद्दा थियो, त्यसपछि यो व्यापारको मुद्दा भयो, अब यो जरुरी छ। चाँडै नै तिनिहरु लाई अधिक रोजगार को लागी मानिसहरु लाई भर्न को लागी हुनेछ, यो आउटसोर्सिंग को एक कारण हो। डग तपाईं आफ्नो आत्मलाई बोसो भन्न सक्नुहुन्न white 38 बर्षे पुरै सेतो केटा, राम्रो भनिरहेको र आकर्षकको साथ। तपाईंको आफ्नै भेदभाव, विविधताको एक हिस्सा हो र स्टेरोटाइपको अधीनमा छ। धेरै सेता मान्छेहरू सोच्दछन्, विविधताको अर्थ एक अर्को हो, जब वास्तवमा, सबै मानिस फरक समुदाय, अलग, उमेर, आकार, पारिवारिक संरचना, यौन संबंध, राजनीति र हामी राम्रोसँग सचेत छौं, लि gender्ग र जातिबाट अलग हुन्छौं। राम्रो पोस्ट